Ndị a bụ ihe na-atọ ụtọ Amazon na-enye maka taa (16-01-2018) | Akụkọ akụrụngwa
Nnukwu ịzụta site na Internetntanetị, na-etinye anyị ohere dị ukwuu nke onyinye kwa ụbọchị. Mana na mgbakwunye, ọ na-etinye anyị n'aka anyị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke onyinye ọkụ, na-enye ndị nwere obere nkeji yana na ngwụcha oge. Site na ebe nrụọrụ weebụ Amazon anyị nwere ike ịnweta onyinye ndị a niile, mana enwere ọtụtụ nke ahụ ọ bụ ọrụ na-agaghị ekwe omume.
Iji gbalịa inyere gị aka n'ọrụ nke nzacha niile onyinye Amazon na-enye anyị, n'isiokwu a anyị na-egosi gị ihe ha bụ onyinye kachasị mkpa nke dị na ụbọchị niile ma ruo na njedebe nke ụbọchị, yabụ echela echiche ugboro abụọ ma ọ bụrụ na ị na-eche maka otu n'ime ngwaahịa ndị a ka ọ daa na ọnụahịa.
1 Yuntab 7 Inch'smụaka Mbadamba ụrọ
2 BlitzWolf ikuku Bluetooth okwu
3 Anker Power Bank obere chaja na-ebugharị ngwa ngwa Astro E1
4 BQ Aquaris U Gụnyere
5 Car akụrụngwa ụgbọ ala Bluetooth na-arụ ọrụ
6 Medion M11 desktọọpụ kọmputa
Yuntab 7 Inch'smụaka Mbadamba ụrọ
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ malite iji teknụzụ ọhụrụ, mbadamba ụmụaka Yuntab nke 7 bụ otu n'ime ngwaahịa kachasị mma dị ugbu a na ahịa. Site na ihuenyo 7-inch, mkpebi ihuenyo HD na kamera ihu na azụ, ụmụntakịrị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ngwa na egwuregwu na vidiyo iji mụta mgbe ha na-egwu egwu. Mbadamba nkume a nwere ọnụahịa mgbe niile nke euro 59,99, ma obere oge anyị nwere ike ịzụta ya na euro 47,90.
Zụrụ YUNTAB Q91 7 inch nke Mbadamba Mbadamba
BlitzWolf ikuku Bluetooth okwu
BlitzWolf na-enye anyị igwe okwu 20w dị ike na bluyo 4.0, wuru ya na ndị na-ekwu okwu 10w abụọ na-enye anyị oke olu nke 80 db. Ochichi nke onye okwu a BlitzWolf ruru awa 10 n'enweghi nsogbu obula, ya mere o di nma obughi nani iji ya na ulo anyi na egwu anyi kachasi nma, kamakwa maka mgbe anyi na ndi enyi anyi puru icho ubochi n'èzí. Ya na mbụ price bụ 42,99 euro, ma ruo ọgwụgwụ nke taa anyị ga-enwe ike zụta ya na ego 10 euro, maka euro 31,18.
Zụta Igwe okwu Bluetooth Ikuku, BlitzWolf Max Bass 20W
Anker Power Bank obere chaja na-ebugharị ngwa ngwa Astro E1
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na smartphones na-adịwanye ike, batrị ka bụ otu n'ime nsogbu ndị na-adịghị edozi kpamkpam. Anker na-enye anyị batrị mpụga nwere ikike nke 5.200 mAh, nke anyị nwere ike iji kwụọ ụgwọ ekwentị anyị, mbadamba ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam, batrị nke igwefoto dijitalụ anyị ma ọ bụ ọkà okwu ikuku anyị ... usualgwọ ya bụ 14,99, XNUMX euro mana maka obere oge Anyị nwere ike ịzụta ya naanị 10,49 euro.
Zụrụ Anker Astro E1 5200mAh
Ọ bụrụ na ị na-eche oge maka BQ Aquaris U Plus ka ọ daa na ọnụahịa, ugbu a bụ ohere gị. Ọnụ ego ya bụ 169,90 mana obere oge anyị nwere ike zụta ya naanị euro 149,90. Ihe nlere a na-enye anyị ihuenyo 5-inch, tinyere 2 GB nke RAM, gam akporo 6.0.1, 16 GB nke nchekwa na 16 mpx n'azụ igwefoto. Ọnụ a dị mma maka ndị ọrụ ahụ niile na-ejikarị ama ha maka WhatsApp, Facebook wee were foto ahụ adịghị mma.
Car akụrụngwa ụgbọ ala Bluetooth na-arụ ọrụ
Avantree na-enye anyị ezigbo ngwaọrụ na-enweghị aka maka ndị ọrụ ahụ niile na-enweghị sistemu jikọtara na ụgbọ ha maka naanị euro 18,74, mgbe ọnụahịa ya bụ euro 34,99. Site na nnwere onwe ikwu okwu nke awa 22, ọ bụ otu n'ime aka kachasị mma na anyị nwere ike ịchọta ugbu a maka ụgbọ ala na ahịa.
Avantree Ngwaọrụ Car Car Bluetooth
Medion M11 desktọọpụ kọmputa
Mana ọ bụrụ na ị na-achọ ịgbanwe kọmputa gị, Medion na-enye anyị ụdị M11, desktọọpụ nwere AM A10-8750 processor, kaadị 750GB GTX2, 8 GM nke RAM na 1 TB nke diski ike maka naanị 339 euro. Ọnụ ego ya bụ 599 euro.
Medion M11 - Kọmputa Desktọpụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ndị a bụ ihe na-atọ ụtọ Amazon na-enye maka taa (16-01-2018)
Otu esi ahọrọ mbadamba maka ụmụaka